Tsy voahaja ny zon’ny ankizy: voatery manivana volamena ireo mpianatra ao Dabolava | NewsMada
Tsy voahaja ny zon’ny ankizy: voatery manivana volamena ireo mpianatra ao Dabolava
Miaina anaty fahasahiranana lalina ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ny kaominina Dabolava any Miandrivazo. Lasa manivana volamena ireo ankizy tokony hianatra any an-tsekoly… Fanadihadiana.
“Maro ireo ankizy tsy mianatra fa teren’ny ray aman-dreny hanivana volamena mba hatao sakafo sy ivelomana… Tsy maintsy atao rahateo ny adidy samihafa”, hoy ny raiamandreny iray, Tiana ao Dabolava, tamin’ny fandalovana tany an-toerana, ny herinandro teo. Telo ny zanany miaraka aminy miasa volamena isanandro ao anaty rano eo amin’ny tetezan’i Dabolava. 10 sy 12 ary 15 taona izy ireo. “Tena sahirana izahay ka tsy maintsy manaraka anay miasa volamena izy ireo. Efa tsy tafiditra an-dakilasy intsony noho ny vola tsy maintsy aloa any an-tsekoly. Manodidina ny 1 2000 Ar isam-bolana izany ho an’ny zaza iray” hoy ny renim-pianakaviana iray, Raharimanana Fleure. Niteraka efatra mianadahy izy ary manampy azy manivana volamena ireo zaza ireo. Manomboka amin’ny 8 ka hatramin’ ny 2 ora tolakandro ny asa. Mahazo akotry; araka ny fomba filaza azy izy ireo ka vidin’ny mpandanja, 4 000 Ar izany. Efa manana fandaharam-potoana kosa i Fitahiana, 12 taona.
Mbola mianatra, saingy manokana fotoana
Mbola mianatra izy ary manampy ny raiamandreniny amin’ny fanivanana volamena, saingy manokana fotoana. “Mianatra aho manomboka alatsinainy hatramin’ny zoma. Ny asabotsy aho miasa volamena ary ny alahady kosa indray mandeha mivavaka”, hoy izy. Ny namany iray antsoina hoe Tsivahiny kosa, niala nianatra teo amin’ny kilasy T2, rehefa tsy nahaloa saram-pianarana ary lasa manivana volamena. Tsy maintsy tsinjaraina ny vola azo isam-bolana ka eo ny vola aloa amin’ny mpitandro filaminana miady amin’ny asan-dahalo. Analiny isam-bolana izany. Eo koa ny hofan-trano ary ny sakafo andavanandro. Tsy tafiditra ao anatin’izany ny vola tokony haloa ampianarana ireo zaza. Farafahakeliny, mandany 50 000 Ar isambolana eo ny fianakaviana iray. “Tena mavesatra ho anay io vola mivoaka io… Tsy mamboly firy intsony ny olona noho ity volamena ity. Tonga ety aminay ireo mpandanja eo amoron-dalana, ambony tetezana eo… “, hoy ihany Raharimanana Fleure. Amin’ny ankapobeny, manodidina ny 3 ka hatramin’ny 15 taona ireo zaza tokony hiditra an-tsekoly voatery manivana volamena manampy amin’ny fivelomana ary eo amin’ny 80% mahery ireo zaza tsy miditra an-tsekoly ao an-toerana.
Mandevina isan-kerinandro noho ny kitrotro…
Olana ho azy ireo koa anefa ny valanaretina. Mbola mamely any an-toerana ny kitrotro. “Mandevina foana izahay ao anatin’ny herinandro noho io valanaretina io. Mbola maika hanao adidy amin’izany izao izahay izao, handeha handevina rehefa avy eo… Tsy maintsy mandoa vola 1 9000 Ar any amin’ny dokotera raha tratran’ny kitrotro”, hoy ihany io renim-pianakaviana io. Hita taratra rahateo izany satria feno mibontsimbontsina, manambara kitrotro ny tarehin’ny zaza iray teo an-drenirano nanivana volamena tamin’io fotoana io.
Iraka manokana tany Dabolava, Synèse R.